क्यालिफोर्नियामा गोली हानेर पाँच जनाको हत्या — Himali Sanchar
अमेरिकाको – क्यानिफोर्नियामा एकजना बन्धुकधारीले जथाभावी गोली चलाएर बुधबार पाँच जनाको हत्या गरेको छ । गोली चलाउने व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको पनि हत्या गरी आत्महत्या गरेकाे प्रहरीले जनाएको छन् ।
क्यालिफोर्नियाको बेकर्सफिल्डमा भएको गोलीकाण्डलाई प्रहरीले घरेलु हिंसाको रुपमा व्याख्या गरेको छ। कर्न काउन्टीका प्रहरी अधिकृत मार्क किङले अपराह्न ५बजेर १५ मिनेटमा गोली चलेको खबर पाउनासाथ प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको जानकारी दिए।
हत्यामा संलग्न व्यक्तिले ट्रक व्यवसायीको हत्या गरेपछि श्रीमतीको हत्या गरेका थिए। उक्त गोलीकाण्डका प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि ती व्यक्तिले लखेट्दै हत्या गरेका थिए। गोली लागेर तीन जना पुरुष र दुई जना महिलाको ज्यान गएको छ। प्रहरीले पीडितहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छैन।
बन्दुकसँग सम्बन्धित हिंसाका घटना दिनहुँ भइरहने अमेरिकामा यो पछिल्लो गोलीकाण्ड हो। पछिल्लो अध्ययनमा अमेरिकाको जनसंख्या विश्वको कूल जनसंख्याको करिब चार प्रतिशत मात्र छ तर करिब ४० प्रतिशत बन्दुक अमेरिकी जनताका हातमा छ।
स्मल आर्म्स सर्भेकाअनुसार, नागरिकका हातमा विश्वभर करिब ८५ करोड ७० लाख बन्दुक छ र त्यसमध्ये ३९ करोड ३० लाख थान बन्दुक अमेरिकी नागरिकसँग रहेको छ।
सीआइएको निष्कर्ष : साउदी राजकुमारको निर्देशनमा पत्रकार खाशोगीको हत्या
श्रीलंकामा राजनीतिक संकट, संसद बैठकमा कुटाकुट !
क्यालिफोर्नियामा डढेलोः अग्नि नियन्त्रकहरुको प्रयास जारी, ५० जनाको मृत्यु
मालिक मारिएको सडक छेउमा ८० दिनदेखि कुरिरहेको कुकुर, जसले दुनियाँको मन जित्यो !
श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेनाले दिए संसद भंग गर्ने आदेश